Mohamed A Jama Xiddig cusub oo kasoo bidhaamay garoomada kubadda cagta Yurub.
Mohamed oo gool qurux badan dhalinaya
Maalmahan danbe waxaa si tartiib ah u soo baxayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo xirfadlayaal kubadda cagta ah, kuwaas oo lagu arkayay garoomo kala duwan oo ku yaala dunida dacaladeeda.
Hadaba Deeyoo.com oo inta badan isku taxalujisa sidii ay u heli lahayd macluumaad ku saabsan dhalinyarada sidata magaceena meel walba oo ay dunida ka joogaan, isla markaana sameeya horumar naftooda anfacaya magac iyo sumcadna usoo jiida halka uu kasoo jeedo.
Mohamed Ahmed Jama oo ah 25 jir ku nool dalka Norway gaar ahaan magaalada Tromsø oo ah waqooyiga dalkan ayaa lasoo baxay xirfad iyo dadaal uu ku muteystay inuu safka hore ka galo xidigaha ay ku xisaabtanto kooxda hada hogaanka u haysa horyaalka dalka Norway oo la yiraahdo Tromsø.
Mohamed Jama inta uu usoo wareegin kooxdan Tromsø waxa uu u ciyaari jiray kooxda Tromsdalen oo ah kooxaha heerka 2aad, laakiin dadaalkiisa ayuu ku gaaray in ay indhihiisa qabtaan tababaraha kooxda uu hada u ciyaaro oo soo iibsaday kuna soo biiriyay kooxdiisan.
Hadaba xiddigan ayaa durbadiiba taageerayaal badan ku yeeshay kooxdiisa iyo Norway intaba isaga oo ku caan baxay orod, fudeyd iyo shaqo aan kala joogsi lahayn inta uu garoonka ku jiro, waxa uuna ilaa hada kooxdiisa u dhaliyay 2 gool oo aad muhiim u ah, haba ugu danbeeyee kii ay shalay kooxdiisa barbardhac min hal gool ah lasoo gashay kooxda Odd Grenland oo ka dhisan magaalada Skien oo ay Soomaali badan degto.
Mo oo ah magaca inta badan warbaahinta Norway ugu yeeraan waxa uu xirtay booskiisa ah weerarka bidix ama midig waxa uuna mar walba ku jiraa 11ka lagu bilaabo garoonka, warbixin ay ka qoreen jaraa'idka dalkan
halkan ka akhriso hadii aad isku fiicantihiin afka dalkan, sidoo kale linkigan ka fiiri bogga kooxda uu u ciyaaro ee Tromsø. .
Waxaan halkana idinkugu haynaa muuqaal yar isaga oo dhalinaya mid kamid ah goolashiisa sanadkan, ka fiirso halkan hoose.
Waa goolkiisii ugu danbeeyay 16 mai 2010
Gool kale isaga oo dhalinaya ka fiirso halkan hoose.
Mohamed A Jama ma aha Xidigii ugu horeeyay ee kasoo baxa dalka Norway, oo waxaan horey idinkuugu soo gudbinay Abdisalaan Ibrahim Cadaay oo kasoo baxay kooxaha dalkan isla markaana gaaray ilaa uu noqdo ciyaariyahankii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay oo safta horyaalka Ingiriiska Premier League, waxaa kale oo ka ciyaaray horyaalka dalkan Norway kabtanka xulka qaranka Soomaaliya Ciise Dheere.
Warbixnadeena danbe ayaan idinkuugu soo gudbineynaa xiriiro aan la sameynay Mohamed Jama iyo sida uu u arko isbadalkan horumar ee uu sameeyay iyo sida uu ku gaaray intaba.
Waxaan idinka codsaneynaa in aad nagu garab istaagtaan raadinta iyo soo ururinta xiddigeheena mustaqbalka leh ee kasoo bidhaama garoomada aduunka, meel walba ha noqoto Afrika, Asia, America iyo Yurub intaba.
Mohamed A O (Deeq)